कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २१ गते शनिबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २१ गते शनिबारको राशिफल !
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख १७, २०७६१७:३६ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
आज दिनभर प्रतिकुलताको सामना गर्नु पर्नेछ । शारीरिक र मानसिक रुपले अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ । अनावश्यक खर्चको मात्रा पनि बढ्नेछ । लेन-देनमा सम्हालिएर रहनु होला । आध्यात्मिकताको प्रति अधिक रुचि रहनेछ । लाभको लालचमा नफस्नु होला । निर्णयशक्तिको अभावलव द्विविधामा ल्याउँछ ।
आजको दिन आनन्दले भरिपूर्ण रहनेछ । व्यापार र आयाम वृद्धि हुनुका साथै लक्ष्मीको कृपा रहनेछ । परिवारजन र मित्रको साथ आनन्द-प्रमोदको वातावरण रहनेछ । नयाँ सम्पर्क र परिचया व्यापारको क्षेत्रमा लाभप्रद रहनेछ । छोटो प्रवास आनन्ददायी रहनेछ । मन उल्लास र प्रशन्नताले भरिपूर्ण रहनेछ ।
शारीरिक र मानसिक रुपले प्रशन्नता छाउनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यको प्रशंशा हुँदा कार्य प्रति उत्साह बढ्नेछ । सहकर्मीको सहकार्य प्राप्त हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ । परिवारजनको साथ आनन्दपूर्वक समय बित्नेछ । व्यवसायमा पदोन्नतिको सम्भावना छ । सहकारी क्षेत्रको कार्य पनि सरलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ ।
भाग्य वृद्धि हुनेछ । विदेशबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । शारीरिक रुपले स्वस्थ रहनु हुनेछ । मानसिक रुपबाट पनि प्रशन्नताको अनुभव गर्नु हुनेछ । मित्र र परिवारजनको साथ आनन्दसंग समय बित्नेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त हुनेछ । आकस्मिक धनप्राप्तिको प्रबल योग छ । विदेश जाने प्रयास र धार्मिक कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ ।
स्वास्थ्य प्रति अधिक ध्यान राख्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्यमा धन खर्च हुनेछ । आज घरकै खान-पान गर्नु लाभदायक हुनेछ । वैचारिक स्तरमा नकारात्मकता छाइ रहनेछ । आध्यात्मिकता प्रति रुची, ध्यान तथा जपले उचित मार्गमा लैजानेछ । जस कारण मानसिक अस्वस्थता कम हुनेछ ।
आजको दिन तपाइँको लागी शुभ रहेको छ । यश कीर्ति हुँदा सरलता रहनेछ । व्यापारको क्षेत्रमा भागिदारको साथ सम्बन्धमा सकारात्मकता बढ्नेछ । वस्त्राभूषणको किनमेलले मन आनन्दित हुनेछ । मित्रको साथ प्रवासको आनन्द लिन सक्नु हुनेछ ।
स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा लाभ हुनेछ । परिवारजनको साथ आनन्दपूर्वक समय बित्नेछ । वाणीमा संयम राख्नु होला । खर्चको मात्रा बढी नहोस यसको ध्यान राख्नु होला । कार्यमा यश र सफालता प्राप्त हुनेछ ।
वादविवादमा नफस्नु होला । सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ । विद्यार्थीको अभ्यासमा सफलता प्राप्त हुँदा उत्साहमा वृद्धि हुनेछ । सम्भवत यात्रा र प्रवासलाई स्थगित गर्नु होला । भविष्यको लागी आर्थिक योजना बनाउन अनुकुल समय छ । परिश्रम अनुसार सफलता प्राप्त हुनेछ ।
मानसिक रुपले उत्साहमा अभाव रहँदा मनमा अशान्ती छाउनेछ । पारिवारिक वातावरण कलेशपूर्ण रहनेछ । परिवारजनको साथ मनमुटाव हुन सक्दछ । धन हानीको योग छ । माताको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ । छातीमा पिडा हुन सक्दछ ।
मित्र र परिवारजनको साथ आनन्दपूर्वक दिन बित्नेछ । कुनै पर्यटन स्थलमा प्रवासको सम्भावना छ । व्यावसायिक मानिसको लागी अनुकुल समय छ । प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । आर्थिक लाभ हुने सम्भावना छ । नयाँ कार्यको शुभारम्भ हुने सम्भावना छ ।
मानसिक रुपले द्विविधा हुँदा कुनै निश्चित निर्णय लिन कष्ट हुनेछ । निरर्थक खर्चबाट बच्नु होला । वाणीमा संयम नराख्दा परिवारजनको साथ मनमुटावको सम्भावना रहनेछ । कार्य सफलता प्राप्त हुन बिलम्ब हुन सक्दछ ।
शारीरिक र मानसिक रुपले प्रशन्नताको अनुभव हुनेछ । उत्साहपूर्ण वातावरण हुँदा नयाँ कार्य गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ । पारिवारिक वातावरणमा सुख शान्ती रहनेछ । मित्र र परिवारजानको साथ प्रवास हुन सक्दछ । धनप्राप्तिको योग छ । धार्मिक यात्रा अथवा धार्मिक कार्यको योग छ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज ९ गते बिहीबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असर १४ गते शनिबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज २८ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेठ ३२ गते शनिबारको राशिफल !